WHO Inoti Zimbabwe Yakagadzirira Kudzivirira Chirwere cheCoronavirus
Ndira 28, 2020
Chirwere checoronavirus chakatangira mudunhu reWuhan kuChina.
Sangano reWorld Health Organisation, WHO, rinoti Zimbabwe iri kutevedzera zvese zvakanzi zviitwe mukudzivirira kuti chirwere cheCoronavirus chisapinde munyika.
Mumiriri weWHO muZimbabwe, Dr Alex Ntale Gasasira, vanoti Zimbabwe iri kuita zvose zvinodiwa senzira yekudzivirira chirwere cheCoronavirus.
Va Gasasira vanoti sangano ravo riri kugutsikana nekuongororwa kuri kuitwa vanhu vanenge vachipinda munyika.
Hurumende inotiwo yakagadzirira kudzivirira chirwere cheCoronavirus ichi.
Vachitaura nevatori venhau panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe nezuro, gurukota rezveutano, VaObadiah Moyo, vakati sezvo Zimbabwe iine kudyidzana kukuru neChina, hurumende inofanirwa kugara yakagadzirira kuona kuti chirwere ichi hachipindi munyika.
Asi VaMoyo vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vambomira kuenda kuChina kudzamara chirwere chiriko charwiswa.
VaMoyo vakaudzawo vatori venhau kuti vari kuita zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi asi vakati mamiriro ezvinhu munyaya dzezveutano anogona kukanganisa kudzivirira chirwere ichi kana chikapinda munyika.
VaMoyo vakatiwo zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kupisa kwemuviri, mabayo, kunzwa kunge uri kupera mweya pamwe nekurwadziwa muchipfuva.
VaMoyo vakati vese vanenge vafungidzirwa kuti vangangove nechirwere ichi vari kubva vaendeswa kuzvipatara zvinoendeswa vanhu vane zvirwere zvinotapuriranwa izvo WHO inotiwo ndizvo zvinotarisirwa.
Asi mubati wehomwe musangano ravanachiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Doctors For Human Rights, Doctor Norman Matara, vaudza Studio 7 parunhare kuti havagudzikani negadziriro iri kunzi iri kuiitwa nehurumende.
VaMatara vanoti dzidziso pamusoro pechirwere ichi ishoma zvakanyanya huye vanoti vana chiremba vari kuti havasati vadzidziswa nezvechirwere ichi.
VaGasasira vaudza Studio 7 kuti kusvika nezuro manheru, vanhu zana nevatanhatu vange vafa nekuda kweCoronavirus huyewo vanhu vanoda kusvika zvuru zviviri nemazana masere vanga vabatwa nechirwere ichi pasi rose.
Coronavirus yakatanga kuChina gore rapera. WHO inoti dzimwe nyika dzava nechirwere ichi dzinosanganisira Japan, Republic of Korea, USA, Singapore neThailand.